Ikhaya IZITOLO ZAMAHHALA WE-AMERICAN SOCCER Abadlali bebhola lezinyawo baseCanada I-Jonathan David Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-athikili yethu ikwethula ngokugcwele kwendaba yobuntwana kaJonathan David, ama-Biography Amaqiniso, Ukuphila Kwasekuqaleni, Amaqiniso Ezintombi, Ukuphila Komuntu, Indlela Yokuphila, Umndeni, nezinye izehlakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana lapho aqala ukwaziwa.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi umsakazi webhola lezinyawo uthathwa njenge- “Into Ebaluleke Kakhulu YaseYurophu” ngokuqondene nebhola (ibhola lezinyawo). Kakhulu, iqiniso lokuthi ubambelela emzileni wokungena ohlwini lokuba ngu Abathandi Bebhola AbaseCanada Abangcono Kunabo Bonke Isikhathi.
Kodwa-ke, bambalwa kakhulu abalandeli bebhola abaye bacabanga ngokufunda iJonathan David Bio esiyilungisile, futhi iyajabulisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Indaba kaJonathan David yobuntwana
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, amagama akhe aphelele nguJonathan Christian David, futhi kuthiwa "I-Canadian Pearl. ” UJonathan David wazalwa ngenyanga yokuqala yeminyaka eyiNkulungwane, ngosuku lwe-14 kuJanuwari 2000, eBrooklyn eNew York City, e-United States. Umkhokhi webhola lezinyawo wazalwa njengendodana yokuqala ezinganeni ezimbili waya kubazali bakhe.
Ngokuqondene nesikhathi sakhe sokuzalwa, uDavid osemncane wayengomunye walabo bantwana abancane abazalwa ngesikhathi sokungaqiniseki okukhulu emhlabeni weplanethi. Iqiniso liwukuthi umdlali webhola waseCanada wayengumntwana onenhlanhla. Ukuqala kweMinyaka eyiNkulungwane entsha akukaze kubonwe noma yikuphi ukuphazamiseka kwezobuchwepheshe noma i-Y2K, (isinambuzane esidume kabi seminyaka). Imicibisholo ayikaze icishe umlilo ngengozi nezindiza njengoba kubikezelwe akukaze kwehle esibhakabhakeni.
I-Millenium bug yayiyinto yokuxoka njengoba yehluleka ukuluma. - I-BBC
Ngokuvumelana ne Ezemidlalo-Umagazini Knack, Abazali bakaJonathan David babevakashele umndeni eNew York ngaphambi nje kokuzalwa kwakhe. Umama wakhe nobaba wakhe bavuma ukuba nendodana yabo eMelika ngakho umndeni uzothola izakhamuzi ngayo.
Ngemuva kwezinyanga ezintathu uDavid ezelwe, bobabili abazali bakhe babona sengathi akusadingeki bahlale eMelika. Umndeni uhambe ePort-au-Prince, eHaiti.
Isizinda Somndeni KaJonathan David
Ukuzalwa eNew York nokudlalela iqembu lesizwe laseCanada akusho ukuthi unemvelaphi yomndeni waseNyakatho Melika. Umndeni kaJonathan David usuka eHaiti, izwe laseCaribbean.
Uma ubukhali emlandweni, cishe uzokhumbula izwe laseCaribbean ngesizathu esidabukisayo. Akusikho okunye ngaphandle kokuzamazama komhlaba okuyinhlekelele okwenzeka ngoJanuwari 12th 2010 okwabulala abantu abacishe babe ngama-316,000.
Ukuzamazama komhlaba kweHaiti ngoJanuwari 2010. Image: Telegraph
Ngiyabonga, ngenkathi uDavid omncane eneminyaka eyi-6 (sekusele iminyaka emithathu kuphela ngaphambi kokuzamazama komhlaba), abazali bakhe banquma ukuthuthela eCanada. Ukuba nezimpande zemindeni ezweni elimpofu, ukuzala indodana yabo eNew York, khona-ke ukwazi ukuthi yini engcono kakhulu kuye ngesikhathi esifanele kusho izinto ezimbili.
Okokuqala, kungenzeka ukuthi uJonathan David wayevela emndenini ocebile onomndeni. Okwesibili, baba nenhlanhla yokushiya iminyaka emi-3 eHaiti ngaphambi kokuzamazama komhlaba okuyinhlekelele ngo-2010.
I-Education ne-Career Buildup
Umndeni kaJonathan David wazinza e-Ottawa (inhloko-dolobha yaseCanada) lapho usuka eHaiti. Ukukhulela eSilicon Valley North kwakuyisidina kakhulu kulomntwana omncane. Izikhathi zokuphila zivela kuphela lapho wayenomndeni kanye / noma isikole.
Ngokuqondene nemfundo yakhe, abazali bakaJonathan David bamhambisa esikoleni saseFrancophone okuthiwa uLouis Riel, lapho athuthukisa khona ukuthanda ibhola (likanobhutshuzwayo).
Ngokusho kwe-ICI-Radio Canada, umsakazi webhola waphawula lesi sikole njengesizathu sempumelelo yakhe yebhola. Waba umlutha wokudlala ibhola eLouis Riel.
Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UJonathan David impilo yakhe yobuntwana isencane kakhulu ibhola lezinyawo. Noma eminyaka yakhe ephakathi, umsakazi webhola akakaze abone amaphupho akhe ebhola lobuchwepheshe njengephupho elidlula. Esikoleni, umfundi oqotho waqala umsebenzi ongahlelekile neqembu lakhe lebhola.
Ngaleso sikhathi, uDavid wayezimisele ngokuqinile ukudlala e-Europe. Kusukela ekuqaleni, wayengenasifiso sokudlala eNyakatho Melika futhi wayengenasifiso sokubuka ibhola laseCanada noma ibhola laseMelika Major League. Kumfana obekezelayo, akunandaba ukuthi waqala endaweni yakini inqobo nje uma engazange ayeke ukuphupha.
Lapho isikhathi silungile, umsubathi osemncane waqala umsebenzi ophansi wasekhaya noGloucester Dragons. Ube eseqhubeka e-Ottawa Gloucester Hornets futhi, e-Ottawa Internationals phakathi konyaka ka-2011 kuya ku-2018.
Ngemuva kwemizamo eminingi yehlulekile ukuzama, intokozo yafika ekugcineni kwabendlu kaDavide. Inenjabulo yabazali bakhe namalungu omndeni wakhe bebengazi mingcele ngesikhathi indodana yabo imenyelwa izivivinyo ngamaqembu athile aseYurophu.
UJonathan David Biography- Umgwaqo Oya Udumo
Kuwo wonke umuntu ozifisayo webhola lezinyawo, kunzima kakhulu ukushiya bobabili abazali namalungu omndeni ngemuva ukuze balandele iphupho lebhola kwelinye izwekazi.
Uthi bewazi? Umdlali webhola waseCanada uqale ukunambitha ukudumazeka eYurophu. UDavid wehlulekile izivivinyo zakhe zangaphambili zombili iRed Bull Salzburg neStuttgart ngaphambi kokudlulisela lokho ngeKAA Gent (iklabhu yebhola laseBelgium).
Ukuqala impilo ngoDe Buffalo (igama lesidlaliso likaKA Gent) kwakungelula futhi. Ngesikhathi sokuqeqeshwa kokuqala, uDavid (oneminyaka engu-16) watshelwa ukuthi aqeqeshe no-G21's GXNUMX. Ekhuluma ngesipiliyoni esinzima, wake wathi:
“Ngizwe sengathi ngenze kabi kangangokuba uGhent wangangisiza kodwa wangikhulula. Ngelinye ilanga ntambama, ngathola ukuqeqeshwa kwesibili futhi ngenhlanhla ngakwazi ukwelulama.
Ukuzethemba kwami ​​kwaqina lapho umqeqeshi eza ezongitshela ukuthi kunento ekhethekile. ”
UJonathan David Biography- Rise to Fame Indaba
Ukuqhathanisa uGent nokuba sesigabeni seklabhu enkulu kunazo zonke eYurophu akunangqondo. Ukuze uqashelwe, uDavid osemusha (oneminyaka engu-19) uthathe isinqumo secebo lokushaya amagoli amaningi kule kilabhu naseceleni lakhe.
Onkulunkulu bebhola babusise inkanyezi yebhola laseCanada ngecala lokushaya ngecala lokushaya amagoli (ukushaya ama-5 emidlalweni yakhe yokuqala engu-5), okwenze ukuthi uGent akhuphule inkontileka yakhe ngo-2022.
U-Asides ushaye amagoli angama-30 ku-Belgian League (kungakapheli isikhathi esifushane), inkanyezi ekhuphukayo yagcwalisa amaphupho akhe ngokufaka imvula ngenkathi isemsebenzini wezwe.
Ubuwazi?… UDavid wabamba izindondo ezintathu ngonyaka ka-2019 (eneminyaka eyi-19) konke kubonga ngekhono lakhe lokushaya amagoli angayazi imingcele. Lezi zinsika zihlanganisa:
(i) Umklomelo weGolide weGolide ka-2019 weCONCACAF
(ii) I-XI ye-ConcacAF Gold Cup ehamba phambili ye-2019
(iii) Umklomelo Wamadoda Wonyaka waseCanadaan Player of the Year
Ukuqagela Ukuqagela owamaka Rise wakhe
Usihlalo kaGent u-Ivan de Witte uthathe isinqumo sokwengeza inkontileka yakhe futhi (kuya ku-2023) lapho nje bebona amakilabhu amakhulu ezungeza kuye njengoshaka.
Ngisho nobhubhane lwe-COVID-19 belwanele ukumisa ama-scouts ekuqeshweni nesiginesha yakhe. Kuze kube yilapho iCoronavirus imisa iligi yaseBelgium, uDavid owayevutha engabaselwe waqoqa izinhloso eziyi-18 nabasizi abayi-8 ngesizini ka-2019/2020.
EBelgium, okwamanje akekho osemusha oye waba nomthelela onjalo eqenjini lakhe njengoJonathan David. Kusukela ngemuva kokutholakala kwe U-Alphonso Davies, umdlali webhola waseCanada uzibonakalise eyisithembiso esihle esilandelayo sesizukulwane sebhola lezwe. Okunye, njengoba sisho, umlando.
Ubudlelwano bukaJonathan David Impilo- Intombi, Ushado noma Ushadile?
Ngubani intombi kaJonathan David? Umthombo: SportsMag Knack
Kuyadabukisa ukuthi ibhola laseCanada liya phambili kuphela lenza izindaba ngamakhono akhe wokushaya amagoli. Muva nje, kube nesifiso esiqinile sokwazi ukuthi ngabe uJonathan David unentombi noma aqonde ukuthi ngabe ushade- nonkosikazi oyimfihlo nezingane.
Ngemuva kokumba kakhulu kuwebhu, sifike esiphethweni sokuthi uJonathan David (ngaleso sikhathi sokubhala) wenze umzamo oqinile wokungayivezi imininingwane yempilo yakhe yobudlelwano. Mhlawumbe abazali bakhe kanye nabeluleki bakhe bangase bakuthathe njengasekuncane kakhulu ukwenza kwakhe umsebenzi.
UJonathan David Ukuphila Komuntu
Ukwazi Impilo KaJonathan David. Isizatho: I-Knack Sports Magazine
Ngubani uJonathan David?, Umdlali weCanada Soccer Player
Ukwazi impilo kaJonathan David uqobo kuyokusiza ukuba umqonde kangcono. Okokuqala, umsakazi webhola ukholelwa ukuthi akugcini ngokushaya amagoli kepha ube nemizwa ethambile ezintweni ezithinta inhliziyo yakhe.
Iqiniso liwukuthi, iCanada ixhumeke ngokujulile emasikweni omndeni waseHaiti. Ngaphezu kwalokho, uJonathan David uyakwazi ukukhumbula yonke imicimbi eyodwa (enhle noma emibi) kusukela ebuntwaneni bakhe.
Kusukela ebusheni bakhe, umdlali webhola waseCanada uye wathwala iHaiti enhliziyweni yakhe selokhu izwe labhekana nokuzamazama komhlaba ngonyaka ka-2010. UDavid Jonathan uthembise ukuthi uzosebenzisa imali yakhe yebhola ukusiza imindeni eswele ePearl of the Antilles.
Okuningi Ngokwempilo yakhe:
Umdlali webhola waseCanada unesimo sangaphakathi sokuzimela, esinika inqubekela phambili enkulu empilweni yakhe yomuntu siqu neyomsebenzi. Osemncane unamandla okuhola indlela, enze namaqhinga wokuphila kwakhe.
Ekugcineni, uDavid ungumuntu ongezwa isidingo sokumelela ubaba wakhe, umama noma udadewabo onobuciko bomzimba (ama-tattoos). Ngombono ongokwenkolo, ungumKristu ozinikele onganqikazi ukudumisa uNkulunkulu lapho enamabanga.
Ukwazi uJonathan David Life Family
Kumdlali webhola lezinyawo osemncane, umndeni wakhe ubelokhu uxhaso angakaze alukhokhele. Woza imvula noma kukhanye, bebelokhu bezomeseka kulo lonke uhlangothi lwendlela yakhe.
Kulesi sigaba, sizokulethela amaqiniso amaningi ngabazali bakaJonathan David namalungu omndeni.
About Umama kaJonathan David
Ngokudabukisayo, umama we-flavour webhola ushonile ezinsukwini zokuqala zikaDisemba 2019. UDavid waya eCanada ngaleso sikhathi ethola izindaba ezidabukisayo zokuthi impilo kanina yayisiwohloka ngokushesha.
Lapho nje esondela ekhefini ohambweni (olwe-London Stopover), watshelwa ukuthi umama wakhe ushonile kabuhlungu. Umngcwabo kaJonathan David mum wenziwa ngoDisemba 14, 2019, nomalume wakhe, oninakwabo, udadewabo, ubaba kanye nezinye izihlobo ezazikhona.
Mayelana nobaba kaJonathan David
Ubaba womdlali webhola njengamanje uphila impilo enesizungu ngemuva kokulahlekelwa ngumkakhe amthandayo cishe ngoDisemba ka-2019. Umgwaqo kaDavid wayengeke ube muhle njengoba kunje ngaphandle kosizo lukababa ambona njengendawo yakhe yokuqala yokuxhumana lapho izinto zingahambi kahle.
Mayelana Nabazakwabo bakaJonathan David
Umdlali webhola lezinyawo waseCanada unodadewethu okwenzeka ukuthi abe ngumnewabo futhi okuwukuphela kwakhe. Kubukeka sengathi abazali bakaJonathan David kumele babe udadewabo eHaiti noma eCanada ngenxa yokuthi wachitha iningi leminyaka yakhe yobuntwana kulawa mazwe.
Amaqiniso Wokuphila KaJonathan David
Amaqiniso Wokuphila KaJonathan David. Umgcini webhola uphila impilo ethobekile eBelgium.
I-Canadian Pearl iphila impilo ehlelekile edolobheni laseGhent, e-East Flanders (eBelgium). UJonathan David uphila impilo ethobekile, engenamali yokusebenzisa imali ngokunganaki.
Njengabanye abadlali abancane bebhola, okungukuthi; U-Iraima Konate, Eberechi Eze, njll., umdlali webhola ubambelela kuzidingo ezisebenzayo ezingabizi kakhulu.
Ukubaluleka kwe-Net Nemholo
Uma ucabanga ukuthi ungumdlali webhola osemncane onomholo ohloniphekile we- € 13K ngeviki, kungakuhle ukusho ukuthi inani likaDavid Jonathan lingabiza cishe amaRandi ayizigidi. Ngokwezibalo ze-SoFIFA, umsubathi webhola waseCanada uthola iholo lonyaka lama- € 1.
Jonathan David Untold Amaqiniso
Kulesi sigaba, sizokutshela izinto esizibheja ongakaze wazi ngazo ngomshini wokushaya amagoli waseCanada.
Iqiniso # 1: Okushiwo yiSOFIFA ngaye
UJonathan David FIFA Stats.
Eminyakeni engu-20 yobudala, uJonathan David usevele uyibabaze iFIFA. Ngokulinganisa kwakhe okungase kube khona, kungenzeka ukuthi abalwe phakathi Abangu-10 abashaya phambili emhlabeni.
Iqiniso # 2: Umlutha we-PlayStation ucishe wonakalisa iCustomer yakhe
Eminyakeni yobuntwana bakhe yobuntwana, uDavid wabona isikhathi lapho ukulutha kuPlayStation kucishe kwamcekela phansi. Lokhu kufike ngesikhathi ayedinga ngaso ukugxila ekufinyeleleni izinhloso zakhe- ukudlala ibhola laseYurophu.
Kuthathe imizamo yokuba ngumqeqeshi ohlonishwayo ukumletha ku-oda. Ngenxa yokuzibamba kwakhe kwamlimaza, uDavide wagwema imikhuba yakhe yokuba umlutha.
Iqiniso # 3: Ubani amkhonzayo njenge-Idol yakhe yeBhola
Emhlabeni jikelele, iningi labadlali abasebancane bebhola libheka okuhle kakhulu njengezithombe zabo- lokhu kufaka phakathi ukuthandwa kwe Christiano Ronaldo, Lionel Messi njll. Njengomdlali webhola okhulayo, akubanga nzima kuDavid ukuthola umuntu oyisibonelo noma isithombe sebhola.
Ngokuqondene nesithixo sakhe sebhola, ungacabanga ngokuthandwa kwezinkanyezi ezikhulunywe ngaye ekuqaleni. Kodwa-ke, kuzokumangaza ukuthi ukuphela kwegama likaJonathan David ming UDwayne De Rosario, Umgcini wegoli eliphezulu laseCanada.
Mina ukubheja ubungeke nje uqagele Idol yakhe. Image: NBC, Express kanye miSoccer.
Iqiniso # 4: Amaqiniso okusheshayo
Uthi bewazi? ICanadaan (esemncane ngeminyaka engama-20) inejubane efinyelela kumakhilomitha angama-33 ngehora. Ukwahlulela, ngendlela, enza ukuhweba ngejubane, siyaqiniseka ukuthi uJonathan David wayengeke abakwe phakathi kwesikhathi the Abadlali abaphezulu abahlanu abashesha kakhulu emhlabeni.
Le vidiyo engezansi izokunikeza izizathu zokuthi kungani amakilabhu amaningi aphezulu ase-Europe acele ukusayinwa kwakhe.
Siyabonga ngokufunda le ndatshana kuJonathan David. LifeBogger ulwela ukunemba nobulungiswa ekuhlelweni kwethu kwansuku zonke izindaba zobuntwana futhi amaqiniso we-biography. Bona okuthile okungabonakali kahle kule ndatshana, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi.